Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Kismaayo oo Heshiis ku kala saxiixday Addis Ababa | Salaan Media
Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Kismaayo oo Heshiis ku kala saxiixday Addis Ababa
Dowladda Soomaaliya iyo Maamulkii Kismaayo ee horay loogu muransanaa ayaa goor dhow heshiis dhowr qodob ka kooban ku kala saxiixday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kadib wada hadalo muddo todobaad ka badan qaatay.
Wada hadalka oo ay garwadeen ka aheyd Urur Goboleedka IGAD ayaa goor dhow waxaa la soo gaba gabeeyay xafladii saxiixa heshiiska oo xalay inta badan la dhameeyay qodobadii la isku hayay ee maalmihii la soo dhaafay la isku hayay.
Xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil oo ka mid ahaa ergada dowladda ee u matalayay wada hadalada Addis Ababa ayaa sheegay in heshiiska la kala saxiixday, isla markaana lagu heshiiyay in Maamulkii Jubaland lagu bedelay Maamulka Jubba, kaasoo muddo labo sano si KMG ah u shaqeynaya, isla markaana hogaaminayo Axmed Madoobe.
“Wada hadalada waa lagu heshiiyay, qodobada lagu heshiiyay waxaa ka mid ah in Maamulka Jubba oo muddo labo sano KMG ah u shaqeynaya inuu hogaamiyo Sheekh Axmed Madoobe, in shir dib u heshiisiin lagu qabto magaalada Muqdisho”ayuu yiri Xildhibaan C/raxmaan Xoosh.
Xildhibaanka oo wareysi siiyay VOA ayaa sheegay in shir labaad oo daba socda shirka ka dhici doono Muqdisho lagu qaban doono magaalada Kismaayo sida uu yiri
Qodobada lagu heshiiyay ayaa waxaa ka mid ahaa in muddo lix bilood Maamulka KMG uu heynayo Dekeda Kismaayo, iyo garoonka Kismaayo, isla markaana kadib lagu soo wareejinayo dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa qodobada lagu heshiiyay ka mid ah in Axmed Madoobe soo magacaabo Gudoomiyeyaasha saddexda gobol ee Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gobolka Gedo, iyadoo qodobkan uu yahay mid culeyskiisa wata.
Xafladii lagu saxiixayay heshiiskan ayaa waxaa goob joog ka ahaa Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay, xubno ka tirsan Beesha Caalamka, wasiirka Arrimaha dibada Itoobiya iyo IGAD.